News Code : 689354
အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်မှုနှင့် ပက်သက်ပြီးလည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)၏ ဩဝါဒတော်များတွင် လာရှိပေသည်။သခင်ကြီး၏ သာဝကတော်များအနေဖြင့် ဤ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်မှုဘက်သို့ လမ်းညွှန်ပြခဲ့ပေသည်။ထို့ပြင် သခင်ကြီး၏ နောက်လိုက်၊နောက်သားများ လိုလားအချစ်၊မေတ္တာထားသူများအနေဖြင့်လည်း သခင်အတွက် ဇေယာရတ်(သ)များ ဖတ်ရွတ်ချိန်တွင် ဤရည်ရွယ်ချက်အကြောင်း ကို ရွတ်ဆိုကြပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)အနေဖြင့် မိုဟမ္မဒ်ဟနဖီယေသို့ ရေးသားထားသည့် မိမိ သေတမ်းစာတွင် မိန့်တော်မူထားပါသည်။
أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَ أَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်ုပ်တော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန် ကြားခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ကြည့်- ဗေဟာရွလ်အန်ဝါရ်ကျမ်း အတွဲ(၄၄)၊စာမျက်နှာ(၃၂၉)
ဟဇရတ်(သ)မွတ်စလင်ဗင်အကီးလ် ရဲရင့်၊ပြတ်သားပြီး သတ္တိ၊ဗျတ္တိရှိသည့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ကိုယ်စားလှယ်တော် သံအမတ်၊ရှဟီးဒ်တော်များ၏ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း(အစ္စလာမ့်အစစ်)ရန်သူများနှင့် တိုက်ခိုက် ပြီး အဖမ်းဆီးခံရလေသည်။ပြီးနောက် ၎င်းအား အိုဗိုင်သွလ္လာဟ်ဗင်ဇေယာသ်ထံ ခေါ် ဆောင်သွားကြလေ၏။အမီးရ်ရေကူဖာ(ကူဖာမြို့ဝန်၊အာဏာပိုင်)အနေဖြင့် ဂျနာဗေ မွတ်စလင် ဗင်အကီးလ် သို့ပြောလေ၏။
”ငါအနေဖြင့် မင်းပြဿနာလုပ်ဖို့ မွတ်စလင်များအကြား သွေးခွဲ၊စည်းလုံးရေး ဖျက်ဖို့၊ကူဖာမြို့သို့ လာတယ်လို့ ကြားတယ်…”
ဂျနာဗေမွတ်စလင်ဗင်အကီးလ်အနေဖြင့် ၎င်းအား အဖြေပေးမိန့်လေ၏။
ما لِهذا آتَيْتُ، وَ لكِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُ الْمُنْكَرَ، وَ دَفَنْتُمُ الْمَعْرُوفَ... فَأَتَيْناهُمْ لِنَأْمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ပြဿနာလုပ်ဖို့ အတွက်လာခြင်း မဟုတ်ချေ။ဘာကြောင့် လာခဲ့ရသည်ဆိုလျှင် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် မကောင်းမှု၊ဒုစရိုက်များကို ပြန့်ပွားစေခဲ့ပြီး၊ ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုများကို မြှုပ်နှံခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့် လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ….ကူဖာမြို့သူ၊မြို့သားများအား ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ကြားပေးပြီး၊မကောင်း ရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ပေးရန် လာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် ပက်သက်ပြီးဇေယာရတ်(သ)တော်များမှ ဇေယာရတ်(သ)သေဝါရေဇ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဖတ်ရွတ်ရမည်မှာ
اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَ الزَّكاةَ، وَاَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَاَطَعْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ حَتّى اَتيكَ الْيَقينُ
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်တော်အနေဖြင့် ကိုယ်တော်(အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ))သည် နမာဇ် မြဲမြံသူ၊ဇကားသ်ပေးဆောင်သူ၊ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ကြားပြသူ၊မကောင်းရာ၊ မကောင်းမှုကို တားမြစ်သူ၊ပြီးနောက် နောက်ဆုံးရှဟီးဒ်ဘွဲ့ကို ခံယူတော်မူသည့်အ ချိန်အထိ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့် အရှင်၏တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အမိန့်ကိုနာခံ ကျင့်သုံးသူဖြစ်ကြောင်း သက်သေထွက်ဆို ပါ၏။
ဤအတွက်ကြောင့် မုချဧကန် ဟဇရတ်(သ)အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင် ၏ အရေးကြီးသည့် အာရှုရာတော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မေ့ လျော့နေသည့် တာဝန်ဝတ္တရားနှစ်ခု(အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်) ကောင်း ရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ပြခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်းအား ပြန် လည်ရှင်သန်အောင် ပြုခြင်းလည်း ပါဝင်နေပေသည်။
ရှုထောင့်တစ်ခုအရ အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ်ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်(ကောင်းရာ၊ကောင်းမှု ကိုညွှန်ကြားခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း)သည် သာသနာ့ တာ ဝန် ဝတ္တရားအားလုံးမှ အရေးကြီးဆုံး တာဝန်၊ဝတ္တရားတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် အဖိုးတန်သည့် အေမာမ်အလီ(အ.စ)၏ ဟဒီးစ်တော်တစ် ပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်ရှုပါမည်။မိန့်တော်မူသည်မှာ-
وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، عِنْدَ الاْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثَة فِي بَحْر لُجِّيٍّ
အဓိပ္ပါယ်။။(သတိရှိပါလေ။)ရှိသမျှ၊ကောင်းမှု၊သုစရိုက်၊ကုသိုလ်များအားလုံး ယုတ်စွ အဆုံး အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ လမ်းတော်တွင် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း(ဂျေဟာဒ်)ဗင် အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ်ဝါနဟီးမွန်ကရ်နှင့်ယှဉ်မည်ဆိုလျှင် ကျယ်ပြန့်လှသည့် ပင်လယ်ရေ နှင့် ရေစက်တစ်စက်ပမာ ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဤတာဝန်ဝတ္တရားနှစ်ခုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျ၊နက် နက်၊ရှိုင်းရှိုင်း အခြေအနေ၊အစစ်အမှန်အတွက် သာဓက(ဥပမာ)တစ်ခု တင်ပြပါမည်။ (ကျေးဇူးပြု၍)ဂရုပြုပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကြီးမားသည့် လယ်ယာတစ်ခု ရှိသည်ဟုမြင်ပါလေ။ဤလယ်ယာအတွက် ရှင် သန်၊ရပ်တည် နေရန်နှင့် အကျိုးအမြတ်ရှိရန်အတွက် အရာနှစ်ခု အရေးကြီး လိုအပ် ပေသည်။ပထမအရာမှာ စည်းစနစ်ကျပြီး ပြည့်စုံဖူလုံသည့် ရေအချိန်နှင့်အညီရနေ ရန် လိုအပ်ပေသည်။ဤသို့မရပါက သစ်ပင်များအားလုံး ခြံထွက်သည့် သီးနှံများအား လုံးခြောက်သွေ့ ပျက်စီးသွားပေမည်။
ဒုတိယဖက်တွင်(ခြံထွက်၊လယ်ထွက်)သီးနှံများအပေါ် ကျရောက်လာမည့် အန္တရာယ် အသွယ်သွယ်ကို တားဆီးကာကွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ်(ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ကြားခြင်း)သည် ကြီးကျယ်ခမ်း နားသည့် သာသနာ့လယ်ယာ၊လယ်မြေအတွက် ရေအသွင်ကိုဆောင်နေပေသည်။ နဟီးအဇ်မွန်ကရ်(မကောင်းမှု၊မကောင်းရာကို တားမြစ်ခြင်း)အန္တရာယ်များကို ကာ ကွယ်ပေးခြင်း အသွင်ဆောင် နေပေသည်။
အကယ်၍ သာသနာ့လယ်ယာ၊လယ်မြေအတွင်း စည်းစနစ်ကျသည့် ရေအ ချိန်မှီ မစီစဉ်နိုင်လျှင် လယ်ထွက်သီးနှံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပေမည်။
ထိုနည်းတူစွာ အကယ်၍ လယ်ယာထွက် သီးနှံများ ၎င်းကို အန္တရာယ်အသွယ် သွယ်မှ မတားဆီး၊မကာကွယ်မည် ဆိုလျှင်(ကြိုးစားထားသည့်)လယ်ယာထွက်သီးနှံ များ တစ်ခုမျှ ကျန်ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
ဤသို့ဖြင့် အထက်ဖေါ်ပြပါ ရီဝါယတ်တော်အရ အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ် မွန်ကရ်(ရှုထောင့်တစ်ခုအရ အဆိုတစ်ခုအရ)ဝါဂျစ်ဗ် အလုပ်များအားလုံးထက် ပိုပြီး အရေးကြီးကြောင်း ဆိုထားလေသည်။ဤအတွက် သက်သေအဖြစ် ဤအလုပ်နှစ်ခု (အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်)မပါဘဲ ကျန်ဝါဂျစ်ဗ် အလုပ်များမှ ရလာဒ်ပေး မည် မဟုတ်ကြောင်း ဆိုလေ၏။
(စာရှုပရိတ်သတ်များ) သိထားကြသည့်အတိုင်း ရီဝါယတ်တော်များ ဖိုကာ အာ(မရ်ဂျယေသက္က်လီးတော်များ)၏ သောင်ဇီးဟွလ်မဆာအေကျမ်းများတွင် လာရှိ သည့်အတိုင်း အမရ်ဗေမအ်ရူဖ်ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ် အဆင့်သုံးဆင့် လာရှိပေသည်။ ၎င်းအဆင့်(၃)ဆင့်အား ဂရုပြုရန် အရေးကြီးပေသည်။ရီဝါယတ်တော်များနှင့် ပတ် သက်ပြီး ဝစာအေလွရ်ှရှီအာကျမ်းအတွဲ(၁၁)၊အလ်အမရ်ဝါအန်နဟီး ကဏ္ဍအခန်း(၃) တွင် လေ့လာနိုင်ပေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နှလုံးသားအနေဖြင့် ကောင်းမှု၊ကောင်းရများအား ချစ်သူ၊ မေတ္တာရှိသူဖြစ်ပြီး မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုများ အားမုန်းသူ၊ရန်သူ ဖြစ်ရပေမည်။
ကောင်းမှု၊ကောင်းရာကို တွေ့မြင်ချိန်တွင် ပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်မည်၊ဝမ်းသာမည် ဖြစ်ပေသည်။မကောင်းမှု၊မကောင်းရာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် ဝမ်းနည်း၊သောက ဖြစ်လေသည်။
အကျဉ်းချုပ်၊အနှစ်ချုပ်ဆိုရလျှင် အတွင်းပိုင်း အခြေအနေ(နာမ်ပိုင်းအခြေ အနေသည်)ဤကောင်းမှုနှင့် မကောင်းမှု၊ကောင်းရာနှင့် မကောင်းရာကို တွေ့ကြုံရ ပြီးနောက် တစ်ထပ်တည်း မခံစားရခြင်းကို ဆိုလိုပေသည်။ဤအခြေအနေသည် အတွင်းပိုင်း၊နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ရပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။
ကောင်းမှုများ၊ကောင်းရာများကို အတွင်းပိုင်း(နှလုံးသားဖြင့်)ချစ်ခြင်း၊မြတ်နိုး ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုများ၊မကောင်းရာများကို နှလုံးသားဖြင့် မုန်းတီး၊ရွံရှာခြင်းကို နှုတ် ဖြင့်ထွက်ဆိုခြင်းဖြစ်ပေသည်။မကောင်းမှုများ၊မကောင်းရာများကို ပြုလုပ်သူများ၊ ကောင်းမှုများ၊ကောင်းရာများကို လျစ်လျူရှု၊ဂရုမပြုသူများအား မိမိ၏နှုတ်ဖြင့် အ ကယ်၍ ရန်ဖြစ်ခြင်း၊မာနတရားမရှိဘဲ၊သူတစ်ပါး၏ခံစားရမှုများကို ထိခိုက်အောင်ပြု ခြင်း မရှိဘဲ မိမိ၏ရှေ့ရှိသူအား သတိပေး၊အသိပေးနိုးဆော်မည်ဆိုလျှင် မုချဧကန် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တွေ့ရလိမ့်မည် ဖြစ်ပေသည်။
အမရ်ဗေမအ်ရူဖ်ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်၏ တတိယအဆင့်ဆိုသည်မှာ လက်တွေ့ ကာယကံမြောက်ရသည့် အလုပ်ဖြစ်ပြီး၊အစ္စလာမ်မီအစိုးရ အာဏာပိုင်တို့၏အလုပ် ဖြစ်ပေသည်။
အကယ်၍ တစ်ဦး၊တစ်ယောက်(သို့)အများအနေဖြင့် ထင်ထင်၊ရှားရှား လူပတ် ဝန်းကျင် အသိုင်း၊အဝိုင်းတွင် မကောင်းမှုများ၊ပြစ်မှုဒုစရိုက်များကို ကျူးလွန်မည်၊ ကောင်းမှု၊ကောင်းရာများ၊ကောင်းမှု၊သုစရိုက်များကို မထီမျက်မြင်ပြုပြီး၊စော်ကားမည်၊ လက်လွတ်မည်၊ပြီးနောက် အခြားသူများ၏ အသိပေးပြောဆိုမှုကိုလည်း ဂရုမပြုမည် ဆိုလျှင် မလွဲမသွေ အစ္စလာမ်မီ၊အစိုးရ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့အားဖမ်းချုပ် ခြင်း၊အပြစ်ပေးခြင်း တို့ကိုပြုပေမည်။
ဤအတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့ကို လွတ်လွတ်၊လပ်လပ် ပေးနိုင်ခွင့်ကြောင့် အစ္စလာမ်မီ၊ဥပဒေများကို ပျက်စီး၊ထိခိုက်လာမည်ဆိုလျှင် ထိုသူအားဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်မည် ဖြစ်ပေသည်။ကျွန်တော်အနေဖြင့် တစ်ဖန်ထပ်ပြီးရေးသားပါမည်။ဤ အ ဆင့်သည် သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် မဟုတ်ချေ။တစ်နည်းဆိုရလျှင်(အစ္စလာမ်မီ) အစိုးရနှင့် အာဏာပိုင်များ တာဝန်၊ဝတ္တရားဖြစ်ချေသည်။
(စာဖတ်ချစ်ပရိတ်သတ်များ) သိရှိထားသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်အနေဖြင့် အ ရင်(စာမျက်နှာများတွင်)ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဗနီအိုမိုင်ယာ အစိုးရလက်ထက်တွင် အထူးသဖြင့် ယဇီးဒ်(လ.န)၏အာဏာရှိစဉ်အချိန်တွင် နေရာတိုင်း၊အားလုံးမကောင်း မှုဒုစရိုက်ပြစ်မှုများ နေရာယူသွားခဲ့လေသည်။ယုတ်စွအဆုံး အစ္စလာမ့်တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ဗဟိုနန်းဆိုက်ရာ၊အာဏာတည်ရာ၊မဒီနာရွှေမြို့တော်တွင်လည်း မကောင်းမှု ဒုစရိုက်အမျိုးမျိုး၊ဟရမ်အလုပ်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ပေကျံသွားရလေသည်။
မည်မျှထိဆိုလျှင် မဒီနာမြို့တော်သူ၊မြို့တော်သားများမှ အုပ်စုတစ်စုသည် အဆိုတော်အမျိုးသမီးများကို ကြိုဆိုရန် မြို့ပြင်ပအထိ သွားရောက်ခဲ့ကြလေသည်။ ပြီးနောက် ဤလုပ်ရပ်အတွက် အရှက်သိက္ခာမဲ့သည့်ဟုလည်း မခံစားခဲ့ကြချေ။ဒီ တော့ စာရှုသူအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဤ အကြောင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကျယ် တဝင့် ဟဒီးစ်တော်ကို လေ့လာကြည့်ပါလေ။ပြီးနောက် အစ္စလာမ်မီဗဟိုဌာနချုပ်နှင့် ဝေးနေသည့် ကျန်မြို့များ၏ အခြေအနေကိုတွေးကြည့်နိုင်ပေသည်။သို့သော်လည်း ပဲ ဤကဲ့သို့သော် အရင်ဖေါ်ပြရေးသားထားသည့်အတိုင်း အခြေအနေများသည် သဘာဝဖြစ်ပေသည်။အကြောင်းမှာ အာဏာပိုင်များ၊အစိုးရအကြီးအကဲများအနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ် မိမိခလီဖွာ၊တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ကိုယ်စားလှယ်တော်ခံယူထားပြီး ဂိုနာပေါင်းစုံ၊ပြစ်မှုဒုစရိုက်အစုံတွင် နစ်မြုပ်နေပါက သာမန်လူထုအား မည်ကဲ့သို့(လူ ကောင်း၊သူကောင်းဖြစ်လာဖို့)မျှော်လင့်ချက် ထားနိုင်ပါအံ့!
اِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدَّفِّ مُولِعاً *** فَشِيمَةُ اَهْلِ الْبَيْتِ كُلُّهُمُ الرَّقْص
အဓိပ္ပါယ်။။မည်သည့် အိမ်ထောင်စု၏ အိမ်ထောင်ဦးစီးမဆို၊သီဆိုခြင်း၊ကခုန်ခြင်းတွင် အလွန်တရာ၊နှစ်သက်၊နှစ်မြို့လာမည်ဆိုလျှင် အိမ်သူ၊အိမ်သားများအားလုံးအနေဖြင့် လည်း ကခုန်ခြင်း၊သီဆိုခြင်းတို့တွင် နစ်မျောသွားပေမည်။
အလ်အန်သေဆွာရ်လေလ်အာမေလီ အတွဲ(၆) စာမျက်နှာ(၄၈၀)။
ဟုတ်ပေ၊မှန်ပေသည်။မကောင်းမှု၊ဒုစရိုက်များ၊ပြစ်မှုများသည် ကမ္ဘာအရှေ့ တိုင်းနှင့် အနောက်တိုင်းရှိ အစ္စလာမ်အားလွမ်းမိုးခဲ့လေသည်။ပြီးနောက် ကောင်းမှု သုစရိုက်များကို မေ့လျော့သွားကြချေပြီး၊သူတော်စင်၊သူတော်ကောင်းများ၊အေဗာ ဒသ် ဝတ်ပြုသူများ၊မိုဟာဂျေများ၊အန်ဆွာများ၊အာဏာပိုင်များနှင့် အဝေးသို့ရောက် သွားကြလေသည်။
ညှဉ်းပန်း၊နှိပ်စက်ပြဿနာလုပ်သူများ၊ဒုစရိုက်ကျူးလွန်သူများ၊တမန်တော် မြတ်(ဆွ)၏ခေတ်တွင် နှိမ်နင်းခံထားရသူများ၊ပြည်နှင်ဒဏ်ခံထားရသူများမှာ အစိုးရ ၏နေရာဌာနများတွင် နေရာယူခဲ့ကြလေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့အခြေအနေတွင် မိမိ၏တည်ရှိ နေမှုအားလုံး(နှလုံးသား၊နှုတ်၊ကိုယ်)ဖြင့် အမရ်ဗေမအ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ် တာ ဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့လေသည်။
အာရှုရာနေ့တွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အားခေါင်းပေါ်တင်ပြီး နှစ်ဖက် သောရဲမက်များအကြားတွင် ထားတော်မူပြီးလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ ဖိတ်ခေါ်နှိုး ဆော်ခဲ့တော်မူလေသည်။
အေမာမ်(အ.စ)အနေဖြင့် နှလုံးသားအဆင့်၊နှုတ်အဆင့်ဖြင့် လှုပ်ရှားမှုသည်အ ကျိုးမသက်ရောက်သည်ကို တွေ့တော်မူသည့်အခါ အဆင့်(၃)သို့ ဝင်ရောက်ရလေ ၏။
အဆင့်(၃)ဖြင့် ရန်သူသည် ချေမှုန်းပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ဤသို့ဖြင့်မကောင်း မှုဒုစရိုက်များ၊ပြစ်မှုများ ဆက်လက်ရှေ့ဆက်နိုင်မည် မဟုတ်တော့ချေ။
ပြီးနောက် အကယ်၍ဤအလုပ်ဖြင့်လည်း မဖြစ်နိုင်လျှင် မလွဲမသွေ၊စတေးမှု (ကုရ်ဗာနီပြုမှု)ကိုပေးရလေသည်။ပြီးနောက် ဤလှုပ်ရှားမှုကို အဆုံးတိုင်အောင် ပို့ ဆောင်ပေးရပေမည်။
ဟုတ်ပေသည်။မှန်ပေသည်။အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် မိမိ၏သွေး ကို ပေးဆပ်လှူဒါန်းပြီး၊ဤကြီးကျယ်လှသည့် တာဝန်ဝတ္တရားကို ကျေပွန်စွာ ထမ်း ဆောင်ခဲ့တော်မူလေသည်။ပြီးနောက် လူငယ်၊လူရွယ်အသက်ကို ရနေပြီးဖြစ်သည့် အစ္စလာမ့်အမည်ရှိ သစ်ပင်အတွက်ရေလောင်းသွားပေးခြင်းနှင့်၊၎င်းအပင်အား ပျက် စီးမှုမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတော်မူခဲ့လေသည်။
အဗာအဗ်ဒွလ္လာဟ်အလ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် ကိုယ်တော်၏သားတော်၊သမီး များ၊သာဝကတော်များ၏ သွေးသည်လည်း အစ္စလာမ့်တည်းဟူသည့် လယ်ယာအ တွက် ရေပမာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေသည်။ထို့ပြင်အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးခဲ့လေသည်။
အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် တော်လှန်ရေးမဆင်နွဲခဲ့မည် ဆိုလျှင် ဗနီအိုမိုင်ယာနှင့်၊ဂျဟေလီယသ်ခေတ်ကျန်များ၊အရှက်သိက္ခာမဲ့မည် မဟုတ် တော့ချေ။ထိုအချိန် အစ္စလာမ်အတွက် မည်သည့်(အန္တရာယ်)တွင်ကျရောက် သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း(စာရှုသူ)သိရှိနားလည်ပေမည်။အကယ်၍ရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင်လည်း အန္တရာယ်ကျရောက်မှုကြောင့် သီးနှံကောင်းကောင်းမွန်မွန် မပေးနိုင်သည့် လယ်ယာ နှင်တူသွားပေမည်။
အရေးကြီးသည့် အစ္စလာမ့်သမိုင်းတွင် ကဏ္ဍာများမှတစ်ခုမှာ ဖြစ်ရပ်မှန်ကရ်ဗ လာပြီးနောက် တော်လှန်ရေးများပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တော်လှန်ရေးများမှာ အနှိုင်းမဲ့သောင်ဝါဗီး(န)တော်လှန်ရေး၊မိုခ်သာတော်လှန်ရေး စသည်ဖြင့် ဤတော် လှန်ရေးများအားလုံး၏ ညာသံမှာ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီး ထိုညာသံမှာ(لاِلِ مُحَمَّد اَلرِّضَا ) (အာလေမိုဟမ္မဒ်(အ.စ)၏နှစ်မြို့မှုအတွက်)ဖြစ်ပေသည်။
ကြည့်-ဗေဟာရ်အနဝါရ်ကျမ်း အတွဲ(၅၂)၊စာမျက်နှာ(၃၀၂)၊ဟဒီးစ်တော်အမှတ်(၄၆) နှင့် အခြားစာမျက်နှာ(၁၇၄၊၁၇၅၊၁၇၈နှင့်၁၉၉)
ယုတ်စွအဆုံး အဗူမွတ်စလင် ခိုရာစာန်နီအနေဖြင့်လည်း ဤညာသံဖြင့် လှုပ် ရှားတော်လှန်ခဲ့ပေသည်။ပြီးနောက် ဗနီအိုမိုင်ယာ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ဖျက် သိမ်းနိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့လေသည်။
သို့သော်လည်းပဲ ၎င်းအနေဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို စစ်မှန်ပြီး(တရားမျှတ သည့်)ပိုင်ရှင်များထံ မလွဲအပ်သည့် အမှားအယွင်းကို ကျူးလွန်ခဲ့လေသည်။
အချုပ်အခြာအာဏာကို ဗနီအဘာစ်အားလွဲပြောင်းပေးခဲ့လေသည်။(သို့မ ဟုတ်)လွဲပေးဖို့ မဖြစ်မနေ အကြပ်အတည်း၊အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် အမရ်ဗေမအ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်သည် အေမာမ်ဟို စိုင်း(န)(အ.စ)တော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှ တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။သခင်အနေ ဖြင့်ဤရည်ရွယ်ချက်ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ရန် မိမိ၏သွေးတော်ကို လှူဒါန်းပေးဆပ်ပြီး အောင်မြင်စွာ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့လေသည်။ထိုတော်လှန်ရေး(အာရှုရာ)၏ အာနိသင်များ တဖြည်းဖြည်း၊တစ်ခုခြင်း ပေါ်ထွက်လာလေသည်။ပြီးနောက် အသိပညာကင်းမဲ့ သည့် လှုပ်ရှားမှုများ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့လေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ဩဝါဒတော်များမှ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဇာဒါရီ များ ကျင်းပနေသည့်အပြင် ကောင်းမှု၊ကောင်းရာများ ညွှန်ကြားခြင်းကို ကျယ်ပြန့်စေ ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊မကောင်းမှု၊မကောင်းရာများကို ကုန်စင်အောင် တိုက်ထုတ် ပေးရမည်ဆိုသည့် မလွဲမသွေသမိုင်းပေးတာဝန်ဖြစ်ကြောင်းသင်ခန်းစာကိုမီးမောင်း ထိုးပြနေပါသလော?
ဧကန်မုချ မလွဲမသွေ နှစ်စဉ်၊နှစ်တိုင်း အဇာဒါရီ၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကို ကျယ်ပြန့်သထက် ကျယ်ပြန့်အောင် ကြိုးပမ်းသင့်ပေသည်။အကယ်၍ ကောင်းမှု၊ ကောင်းရာသုစရိုက်များကို မေ့လျော့သွားပြီး၊မကောင်းမှု၊မကောင်းရာဒုစရိုက်များကို တိုးပွားစေမည်ဆိုလျှင် ဆရက်ဒိုရ်ှရှိုဟဒါအေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ရည်ရွယ်ချက် ကို မရောက်သေးကြောင်း ထင်ရှားနေပေသည်။
လက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ ခေတ်ကာလတွင်လည်း အစ္စလာမ်တည်းဟူသော် လယ် ယာအတွက် ရေသွင်း၊ရေထည့်ပေးခြင်း၊ရေလောင်းပေးခြင်းဆိုသည့် ကောင်းမှု၊ ကောင်းရာများကို ညွှန်ကြားပေးခြင်း၊နှင့်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်းအလုပ် ဆိုသည့် မကောင်းမှု၊မကောင်းရာများကို တားမြစ်ခြင်းသည် အရေးကြီးလိုအပ်ပေ သည်။
အကယ်၍ အရေးကြီး၊အဓိကအရာနှစ်ခုအား မေ့လျော့ခဲ့မည်ဆိုလျှင် အစ္စလာမ်မီ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အန္တရာယ်များနှင့်ပြဿနာများအဖြစ် အစ္စလာမ့် သာသနာတော် ဆန့်ကျင်ရေး၊ဝါဒီအနောက်တိုင်းများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှု၊တိုက်ခိုက်မှုကို ခံရလိမ့်မည် ဖြစ်ပေသည်။